Hooyo Soomaaliyeed ayaa shan caruur oo mataano ah ku umushay magaalada Mogadishu… – Hagaag.com
Posted on 4 Agoosto 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Isbitaalka Recep Tayyip Erdoğan (Ex Digfeer) ee Magaalada Muqdisho ayaa shan carruur oo mataano ah waxaa ku umushay hooyo Soomaaliyeed oo ku nool Caasimadda Muqdisho.
Dr. Axmed Isaaq Xuseen oo horkacayay kooxdii dhakhaatiirta ahayd ee qaliinka ku sameysay hooyadaan Soomaaliyeed ayaa sheegay in qaliinka uu qaatay muddo afartan daqiiqo ah.
Dr. Axmed Isaaq Xuseen ayaa sheegay in lagu guuleystay qaliinkaasi, hooyaduna ay xaalad wanaagsan ku umushay shanta carruurta ee mataanaha ah, inkastoo mid ka mid ah uu dib ka saqiiray.
Dr. Axmed Isaaq oo wareysi siiyay Laanta afka Somaliga ee BBC ayaa tibaaxay in dhif iyo naadir ay tahay in caalamka lagu arko in hooyo ay umusho shan canug oo mataano ah. Waxa kaloo uu intaa ku daray in markii ugu horeysay ay tahay in hooyo Soomaaliyeed ay markeliya umusho shan carruur ah.
“Gabadhaan waxay ka tahay waxyaabaha mucjisooyinka ah, ee sida naadirka ah loo arko caalamka, waana kiiskii ugu horeeyay intaan hubo Somalia, hooyo inay shan canug halmar umusho.” Ayuu yiri Dr. Axmed Isaaq Xuseen.
Waxa kaloo uu yiri “Markii baaritaankii lagu sameeyay waxaan ogaanay hooyada inay fool tahay, minkeeda uu furan yahay, Computer baan saarnay, waxaana ku aragnay in ay afar canug oo nool ay minkeeda ku jiraan, hal canugna kafka ayuu ku jiray. Laba ka mida waxay ahaayeen madax keen, saddexna waxay ahaayeen dabo keen, kullina way noollaayeen.”
Dhakhtarka ayaa intaa ku daray “Ka dib markaan ciddii la hadalnay waxaan go’aansanay in maamadan ay qaliin ku dhasho, maadaama ilmaha qaarkood ay dabo keen yihiin, wayna naga aqbaleen.”